ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်အရောင်, ရေချိုးခန်းအာကာသအမှန်တကယ် Hip!
2021 / 03 / 29 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 2969 0
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုတင်းမာမှုပိုမိုဖြစ်စေရန်အရောင်ဖြင့်မကြာခဏထောက်ပံ့လေ့ရှိသော်လည်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အသုံးပြုခြင်းသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သော်လည်းရေချိုးခန်းနေရာအကျယ်အ ၀ န်းအရအရောင်အဆင်းသည်ရှေးရိုးစွဲဆန်သော်လည်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကမှိုင်းအောင်။
သီးသန့်ရေချိုးခန်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အရောင်ရှိသင့်သလား။ အဖြေကဟုတ်တယ်။ ဒီပြissueနာမှာဒီအကြောင်းပြောကြရအောင်။
လိမ္မော်ရောင်သည်တောက်ပသောအရောင်ကျောင်း၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ထူးခြားသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေထုရှိသည်။ သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်သို့မဟုတ်အလင်း၊ သို့မဟုတ်တောက်ပသောသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်သောအရာတစ်ခုစီတွင်လူတို့အားမူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးရန်မည်သို့မည်ပုံကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအခြေအနေမျိုးရှိသည်။
အပြာရောင် + လိမ္မော်ရောင်
အပြာရောင်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးနက်ရှိုင်းသောနေရာသည်ကြီးမားသောနေရာတွင်ဖြည့်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်တောက်ပ။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာမှုရှိသဖြင့်အနည်းငယ်မျှသောအလှဆင်ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်လုံ့လဝီရိယရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့နှစ် ဦး တွေ့ဆုံကြသောအခါမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမရှိဘဲကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအာကာသတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်။
လျှောက်လွှာတွင်အပြာရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ရောစပ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ကွဲပြားမှု၏အချိုးအစား၊ အပြာရောင်ကိုအဓိကအသံအဖြစ်၊ လိမ္မော်ရောင်သည်ဝဲအရောင်အနေနှင့်၊ ကိုက်ညီမှုအထဲမှအပြင်ထွက်သည်။
မြက်စိမ်းအစိမ်း + သန္တာလိမ္မော်
အဖြူနှင့်အဖြူရောင်အရောင်ရှိသောရေချိုးခန်းနေရာတွင်အစိမ်းရောင် + သန္တာကျောက်တန်းရှိအရောင်ဖြည့်ရန်အတွက်လိမ္မော်ရောင်ရှိဂျီ ometric မေတြီအရောင်အားဖြင့်ရေချိုးခန်းအားတောက်ပ။ နူးညံ့စေသည်။ အလင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရောင်ပေါင်းစပ်မှု၊ နူးညံ့သောနူးညံ့သောစတိုင်ကိုအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်း။
ပန်းရောင် + အဖြူ
ပူနွေးသောပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်များဖြင့်ရေချိုးခန်းအာကာသအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ခြုံငုံသောအသံသည်ပျော့ပျောင်း။ မိန်းကလေးငယ်၏နုပျိုသောဝန်းကျင်နှင့်နွေးထွေးမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဖြူစင်သောဖြူစင်သောအဖြူရောင်နံရံများဖြင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်အနည်းငယ်သောတောက်ပသောပန်းရောင်ကြွေပြားများ၊ စိတ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအရောင်များဖြင့်လူတို့အားနွေးထွေးမှုစွမ်းအားကိုပေးသည်။
ဝတ်လစ်စလစ်ပန်းရောင် + မှောင်မိုက်အစိမ်းရောင်
ဝတ်လစ်စလစ်ပန်းရောင် + မှောင်မိုက်သောအစိမ်းရောင်၏အရောင်တိုက်မှုသည် ၃ မှ ၂ အထိအချိုးအစားရှိပြီးချောမွေ့သောစပျစ်သီးပါသောလေထုကိုရရှိစေသည်။ အစိမ်းရင့်ရောင်အခြေစိုက်စခန်း၏သုံးပုံနှစ်ပုံသည်ပန်းရောင်ရောစပ်မှု၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုဖြည့်စွက်။ အရောင်ကွာခြားမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံတင်းမာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပန်းရောင် + အနက်ရောင်
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနက်နှင့်ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင်ကဲ့သို့သန့်ရှင်း။ တောက်ပမှုမရှိသော်လည်းလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားထက်များသော်လည်း။ အရောင်နှစ်မျိုးသည်ကြွေပြားများပေါ်တွင်မတူညီသောပစ္စည်းများနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ပန်းရောင်အခန်း၊ မူလနူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ အရောင်ကျက်သရေကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သာအနက်ရောင်တိုက်မှုနှင့်အတူကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ကြော့ရှင်းစွာစီးနင်းထားခြင်း၊
ပန်းရောင် + မီးခိုးရောင်
၎င်းသည်မျှမျှတတဂန္ထဝင်အရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်၊ ကြော့ရှင်းပြီးရင်ခုန်စရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့တင်ပြသောအမြင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ သူတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလှဆင်သည်ဖြစ်စေ၊ တူညီသည်ဖြစ်စေသူတို့သည်အရောင်စွဲ။ တန်ဖိုးမထားသင့်ပါ။
အစိမ်းရောင်၊ ၎င်းသည်areaရိယာကျယ်ပြန့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းအလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါ ၀ င်သည့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကိုထုတ်ဖော်ရန်ဖြစ်စေ၊ ၄ င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်သည့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေလူတို့အနေဖြင့်လူတို့အားပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ချစ်ကြရန်ဖြစ်သည်။
အစိမ်း + သစ်သားအရောင်
အစိမ်းရောင်အရောင်ကိုအာကာသတစ်ခုလုံးဖြန့်ရန်၊ သဘာဝလေထုကိုထုတ်ပေးရန်အဓိကလေသံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သစ်သားအရောင်အားအရောင်တောက်ပစေရန်အတွက်ဝဲအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတောင့်တင်းပြီးသဘာဝအရောင်တင်ဆက်မှုသည်တစ်ခုလုံးကိုပြောရန်မဖြစ်နိုင်သည့်သဘာဝအလှအပကိုပေးစွမ်းသည်။
အစိမ်း + အဖြူ
အစိမ်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစည်းအဝေးသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိုးအစားကိုဂရုမစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလှဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ခွဲခွဲများအကြားပြိုင်ပွဲသည်နူးညံ့ကြင်နာမှု၊ လန်းဆန်းမှုနှင့်ချစ်စရာကောင်းမှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
အစိမ်း + အနက်ရောင်
ပူပြင်းသောအနီရောင်အရောင်သည်မကြာခဏဆိုသလိုထက်ဝဲအရောင်အဖြစ်ပုံပေါ်သော်လည်း၎င်းသည်အဓိကအရောင်ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ အချိုးအစားမည်သို့ပင်ရှိပါစေ, သူကနေဆဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်အမြင်အာရုံအမြင်ရှိပါတယ်။
အနီရောင် + မီးခိုးရောင်
လေးလံသောအုတ်နီသည်အခြားမှောင်မိုက်သောအရောင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းသည်ကြားနေပူနွေးသောလေသံဖြင့်အာကာသတစ်ခုလုံးအားအချိန်နှင့်အမျှပြန်လည်ခံစားနိုင်ပြီးနက်ရှိုင်းသောအဆင့်မြင့်မီးခိုးရောင်နှင့်အတူနက်ရှိုင်း။ ချစ်စရာကောင်းသောအဆင့်အတန်းကိုဖန်တီးသည်။
အဖြူ + အနီ
areaရိယာကျယ်ဝန်းသည့်အနီရောင်များထဲတွင်အဖြူရောင်များပါ ၀ င်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလှပသောအသွင်အပြင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အနီရောင်မှအဖြူရောင်အရောင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်၎င်းသည် gradient ၏လှပမှုမှဆင်းသက်လာသည်။
ဤအရောင်များကိုဖတ်ပြီးသည့်နောက်၊ မူလရေချိုးခန်းနေရာသည်ဤမျှ“ ရောင်စုံ” ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသလား။ အမှန်မှာ၊ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေချိုးခန်းနေရာအတွက်အရောင်များစွာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအမြင်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါ, လျောက်ပတ်ခြင်းနှင့်အကြီးတန်းမဆုံးရှုံးပါ။
ရှေ့သို့ :: 2021 ရေချိုးခန်းအရောင်နှင့်အတူ, "Earthy" ဗေဒမှနှုတ်ဆက်, သင်၏အိမ် "အရောင်" Up ကိုကြကုန်အံ့! နောက်တစ်ခု: ဤသည်မှာရေချိုးခန်းဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်၌ရှိသောအိမ်မှာအိမ်သာတစ်ခုပဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအသစ်များ